ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကုသမှု နည်းလမ်းများ - Hello Sayarwon
ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေပေါ်လာရင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသချင်မှာ သဘာဝပါ။ ဒီအမာရွတ်တွေဟာ ဝက်ခြံပေါက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေကို ပြန်သတိပေးနေသလို ဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရည်ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကံကောင်းတာက ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းတွေ ရှိနေတာပါပဲ။
ကုသမှုနည်းလမ်းတွေ အမြောက်အများရှိပြီး ရေပန်းအစားဆုံး နည်းတွေက အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးများ အသုံးပြုခြင်း (ဆရာဝန်ညွှန်းသောဆေး (သို့) ဆေးစာမလိုသောဆေး)
ဒီဆေးဝါးတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်ကို လုံးဝပျောက်သွားအောင် ဒါမှမဟုတ် မှိန်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေဟာ ဈေးမကြီးသလို အလွယ်တကူလည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အမာရွတ် နီရဲရောင်ရမ်းနေတယ်ဆိုရင် သက်သာသွားအောင် အဆိုပါဆေးတွေက ကူညီပေးနိုင်သလို အမာရွတ်တွေကြောင့် မည်းနေတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း မူလအသားရောင် ပြန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်ခြံအခြေအနေ ဆိုးရွားလာရင်တော့ ပိုပြီးသင့်တော်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကို သုံးစွဲဖို့လိုလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်ကပ်ခွာ (Chemical peels)
ဒီနည်းတွေဟာ သင့်အရေပြားရဲ့ အလွှာတလွှာကို ကွာသွားစေမှာဖြစ်ပြီး အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ အရေပြားဟာ ပိုလို့ နူးညံ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဟာ သင့်အရေပြားကို အနည်းငယ်ထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ ပိုးဝင်ခြင်းအစရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေပြန်ဖြည့်ပေးသော ဆေး ထိုးခြင်း (Fillers)
ဒီနည်းလမ်းမှာဆိုရင် အဆီ သို့မဟုတ် အသားအရေတင်းရင်းစေသော ကော်လဂျင် (collagen) ဓါတ်ကို အမာရွတ်ရှိတဲ့နေရာက အရေပြားထဲကို ထိုးသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီနောက်မှာ ထိုးထည့်လိုက်တဲ့ အရည်တွေဟာ ပြန့်ကားသွားပြီး အရေပြားကို ဆွဲဆန့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အရေပြားတင်းပြီး ဆန့်သွားတဲ့အခါ အတင်းကြီးပြူးပြဲကြည့်မှသာ အမာရွတ်ကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အချက်က ဒီလိုဆေးထိုးတာဟာ ယာယီသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ခါထပ်ခါ ထိုးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိန်ပုံစံဘီးလေး သို့မဟုတ် ဘရပ်ရှ် ကိရိယာလေးကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံလွှာကို တိုက်စားဖယ်ထုတ်ပစ်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေပြီး သွေးထွက်စေပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ ပိုပြီးနူးညံ့တဲ့ အရေပြားအသစ် ပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ပိုပြီးနုပျိုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ကုသနိုင်တဲ့အတွက် အမာရွတ်ရှိတဲ့ နေရာတွေဟာ တခြားအရေပြားဧရိယာတွေနဲ့ တပြေးညီဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းမှာတော့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေဖို့အတွက် လေဆာကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး သင့်အသားအရေကို ပိုကြည့်ကောင်းလာစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ကုသတဲ့ နည်းအသစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမာရွတ်တွေရှိတဲ့ အရေပြားအဟောင်းကို လောင်ကျွမ်းဖျက်ဆီးပစ်ပြီး အရေပြားအသစ်ပြန်လည်ထွက်လာစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်အရေပြားရဲ့ အရောင်အသွေးကို ယာယီပြောင်းလဲစေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ အင်မတန်ရှားပါးပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ အလင်းဟာ စိတ်ချရပြီး သင့်အရေပြားကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ အလင်းသုံးကုသခြင်းဟာလည်း အထက်က နည်းလမ်းတွေနည်းတူ အမာရွတ်တွေရှိတဲ့ အရေပြားအဟောင်းကို လောင်ကျွမ်းဖျက်ဆီးပစ်ပြီး အရေပြားအသစ်ပြန်လည်ထွက်လာစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြိမ်ရေအတိုင်း ကုသမှုခံယူပြီးနောက်မှာ သင့်အမာရွတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်အရေပြား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ အချိန်အနည်းငယ်သာကြာစေမယ်ဆိုပေမယ့် အလင်းရဲ့ အာနိသင်အပြည့်အဝရတဲ့အထိ ကုသမှုကို အကြိမ်များစွာ ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လူနာတွေမှာ အမာရွတ်တွေဟာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုပါ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီအမာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် အရေပြားခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ အမာရွတ်တွေကို လှီးဖြတ်ပြီး အရေပြားအသစ်နဲ့ အစားထိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဟာ အမာရွတ်တွေကို လုံးဝဥဿုံဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် အများကြီးသက်သာသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေဟာ သင့်ဘဝကို ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ကုသမှုနည်းလမ်းတွေကို ခံယူပြီး အမာရွတ်တွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ဒါမှမဟုတ် သက်သာသွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အမာရွတ်အမျိုးအစားနဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေတို့ပေါ်မူတည်ပြီး နည်းလမ်းတခု ဒါမှမဟုတ် တခုထက်ပိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်လိုက်သမျှတွေဟာ သင့်အရေပြားပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုသမှု မခံယူမီအချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာစွာ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
1. Treatments and drugs. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/basics/treatment/con-20020580. Accessed November 14, 2016.
2. Cosmetic Procedures: Scars. http://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-scars#2.
3. Scars – Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/Scars/Pages/Treatment.aspx. Accessed
4. Guide to Treating Acne Scars and Skin Damage. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/features/acne-scars#1. Accessed November 14, 2016.
အပ်မသုံး မီဆိုကုထုံး နှင့် ဝက်ခြံများ
သင့်အရေပြားဆရာဝန်က ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်သော အမာရွတ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်သလား
ဝက်ခြံအနာကျက်ပြီးနောက်ကျန်ခဲ့သော အနီစက်များကို လျော့နည်းစေရန်